Ronaldo Luis Nazario avy ao amin'ny Lima Childhood Story Plus Untold Biography
Home CLASSIC STARS Ronaldo Luis Nazario avy ao amin'ny Lima Childhood Story Plus Untold Biography facts
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny Lalao baolina kitra iray izay malaza amin'ny anarana; 'Fenomeno'. Ny tantaran'i Ronaldo Luis Nazario de Lima momba ny tantaram-pianakaviana sy ny tantaram-piainan'ny tantaram-piainana tsy hita isa dia mampahatsiahy anao ny zava-nitranga rehetra nandritra ny fahazazany hatramin'izao. Ny analizy dia mirakitra ny tantaram-piainany talohan'ny lazany, ny fiainam-pianakaviana ary ny maro amin'ireo zavatra tsy fantatra sy tsy fantatra momba azy. Lets Begin.
Ronaldo Luis Nazario avy ao amin'ny Lima Childhood Story Plus Untold Biography facts -Fiainana tany am-boalohany
Ronaldo Luis Nazario avy ao amin'ny Lima Childhood Photo
Ronaldo Luis Nazario de Lima dia teraka tamin'ny 18th of September 1976 tany Rio de Janeiro, Brésil avy tamin'ny rainy, Nelio Nazario de Lima, Snr ary ny reniny, Sonia dos Santos Barata. Izy no zanak'izy ireo fahatelo.
Ronaldo Luis Nazario de Lima dia avy amin'ny fianakaviana mahantra izay niady mba handefasana azy any an-tsekoly. Nekena ho zaza amam-behivavy nandritra ny taona nahalehibe azy izy, tao amin'ny faritry ny oniversite. Ny fivoarany sy ny fahombiazany tany am-pianarana dia nahatratra ny fara tampony hatramin'ny taona 11 rehefa nitranga ny zavatra tsy ampoizina. Ny ray aman-dreniny, Nélio Nazário de Lima sy Sônia dos Santos Barata, dia nisaraka ary nandeha tamin'ny fomba samihafa tamin'izy 11. Tsy misy olona tokony hikarakara azy, dia tsy maintsy niala tamin'ny sekoly i Ronaldo Luis Nazario de Lima. Amin'izay fotoana izay, ny hany làlan-tokana mba hahazoana vola kely dia ny miala amin'ny fifaninanana baolina eny an-dalambe. Nahita fitiavana tamin'ny baolina kitra izy tamin'ny fikatsahana ny ho velona.
Ronaldo Luis Nazario avy ao amin'ny Lima Childhood Story Plus Untold Biography facts -Fifandraisana sy ny Fiainam-pianakaviana
Ny fiainam-pianakavian'i Ronaldo Luis Nazario de Lima dia nivoaka tamin'ny taona 1997 rehefa nihaona tamin'ny modely Breziliana sy ny mpilalao sarimihetsika Susana Werner izay nankasitrahany tamin'ny fahitalavitra malaza Breziliana antsoina hoe 'Malhacao'.
Ny fifandraisan'i Ronaldo amin'i Susana Werner
Ny fangatahany nasongadina tamin'ny fizarana telo dia nankatoavina. Samy nifankatia izy ireo rehefa nihaona. Izany dia nahatonga fifandraisana maharitra izay naharitra hatramin'ny fiandohan'ny 1999.
Ny famaranana ny fifandraisana iray dia midika ho fanombohan'ny hafa ho an'ilay mpikomy izay mahita ny tenany eo an-tampon'ireo lisitr'ireo lehilahy maniry vehivavy. Taorian'io taona io, nolavin'i Ronaldo ny fitiavan'ilay vehivavy mpilalao baolina Breziliana Milene Domingues teo aloha.
Ny fifandraisan'i Ronaldo miaraka amin'ny Milene Domingues
Tsy nila fotoana izy talohan'ny nahaterahany. Rehefa hitany fa bevohoka izy, dia nentin'i Ronaldo tany amin'ny fiovana izy. Izy roa dia samy nanambady tamin'ny Aprily, 1999. Tamin'ny 6th of April 1999, Milene dia niteraka ny lahimatoan'i Ronaldo, Ronald tany Milan.
Ronaldo sy Milene, miarahaba ny zanany
Ny fanambadian'izy ireo dia naharitra 4 taona taorian'ny nisarahan'izy ireo nisaraka.
Tao amin'ny 2005, Ronaldo dia nirotsaka tamin'ny modely Breziliana sy ny MTV Star Daniela Cicarelli izay bevohoka saingy voan'ny fery.
Ronaldo sy Daniela
Ny fifandraisan'izy ireo no fohy indrindra. Velona telo volana monja taorian'ilay lanonana fampakaram-bady mahafinaritra izay sarobidy ny £ 700,000.
Tamin'io taona io i 2005, dia nanao i Ronaldo paternity test ary notendreny ho rain'ny zazalahy atao hoe Aleksandra izy.
Ronaldo sy Alexandra
Teraka ilay zazalahy taorian'ny fifandraisana fohy teo amin'i Ronaldo sy Michele Umezu, mpitsabo Breziliana iray izay nihaonan'i Ronaldo voalohany tany Tokyo, tao amin'ny 2002.
Ronaldo sy Michele
fanafintohinana: Tamin'ny April 2008, Ronaldo dia nandray anjara tamin'ny raharaha mahakasika ny telo travesti ireo mpivaro-tena izay nihaonany tao amin'ny toeram-pandihizana iray ao an-tanànan'i Rio de Janeiro. Rehefa hitany fa lehilahy ara-dalàna izy ireo, dia nanolotra azy ireo $ 600 i Ronaldo mba hiala. Iray amin'ireo telo, efa maty maty i Andréia Albertini nangataka $ 30,000. Avy eo dia nampiseho ilay raharaha tamin'ny media izy. Nofoanana ny fanambadiany tamin'i Maria Beatriz taorian'ilay horohorontany. Taorian'ny fanazavana marobe momba ilay olana dia niverina indray ny fifandraisana. Tamin'ity indray mitoraka ity, ny fitiavana dia nandany azy ireo.
Ronaldo sy Maria
Nivoaka niaraka tamin'ny ampahibemaso izy ary nahazo izao tontolo izao hahafantatra fa hikaroka azy bebe kokoa.
Ronaldo sy Maria (Fitiavana ny ainy)
Tamin'ny 24 ny volana 2008, Maria Beatriz Antony dia niteraka ny zanany vavy voalohany, Maria Sophia, tao Rio de Janeiro.
Tamin'ny volana 2009 dia nifindra ho amin'ny vaovao ny fianakaviana manontolo penthouse ao São Paulo. Tamin'ny 6 April 2010, Maria Beatriz Antony dia niteraka ny zanany vavy faharoa, Maria Alice any São Paulo. Tamin'ny fotoana niandohany dia teraka tamin'io andro io ihany i Maria Alice, taonan'ny 10 taona taorian'ny nahaterahan'i Ronald zokiny lahy.
Taorian'ny fanamafisana ny zanany fahaefatra dia nilaza i Ronaldo tamin'ny 6 December 2010 fa nananany izy vasectomy, mba "hanakatona ny orinasa", nahatsapa fa ampy ny manana zanaka efatra.
Ronaldo Nazario de Lima sy ny fianakaviana
Ronaldo Luis Nazario avy ao amin'ny Lima Childhood Story Plus Untold Biography facts -Fifandraisana amin'ny Zanaka lahimatoa, Ronald.
Tena namana tsara izy ireo. Tsy misy fisalasalana momba ny maha-lahy sy maha-vavy azy ireo. Tsy misy arahin'ny fihetseham-po tsy misy ifandraisany teo amin'i Ronaldo (ray) sy Ronald (Zaza).
Tahaka ny Ray tahaka ny Zanaka-Ronaldo sy Ronald
Ronald dia mahazo tombony amin'ny rainy indrindra indrindra eo amin'ny famolavolana, fanabeazana ary fitarihana.
Ronaldo Luis Nazario avy ao amin'ny Lima Childhood Story Plus Untold Biography facts -Manomboka amin'ny baolina kitra
Nanomboka ny baolina kitra i Ronaldo
Vao volana vitsy taorian'ny volana nialany tamin'ny baolina kitra, Ronaldo Luis Nazario de Lima dia mpikamnana ny lalao baolina kitra rehetra nalamina tao amin'ny faritra misy azy. Nahazo fanohanana feno avy amin'ireo namany sy mpifanolo-bodirindrina izay nahafantatra ny zava-nanjo azy izy ary naniry azy handroso haingana. Ity fiandohan'ny baolina kitra ity dia nanomboka teny an-dalamben'i Bento Ribeiro, faritra avaratr'i Rio De Janeiro. Io ihany koa no toerana izay nanombohan'ny fiakaran'izy io teo amin'ny tampon'ny baolina manerantany.
Ronaldo dia nampiasa ny fahafahana rehetra omena azy mba hampiseho ny fahaizany ny làlana revolisionera eny an-kianja. Ny karamany dia nandoa vola rehefa nizarazarain'i Jairzinho, britanika, izay mpilalao baolina kitra sy scout tamin'izany fotoana izany. Rehefa nanatri-maso ny zava-bitany i Jairzino dia nanoro hevitra ny taona 16 taona tany amin'ny klioba taloha Cruzeiro.
Tamin'ny vanim-potoany voalohany niaraka tamin'ny klioba dia namaky rakitsoratra i Ronaldo tamin'ny famonoana tanjona 44 mahagaga ao amin'ny lalao 44. Ny fanapaha-keviny mitebiteby, ny fahasamihafana ara-batana ary ny fanaraha-maso akaiky sy ny teknikam-pampandrosoana dia nampitombo ny mpankasitraka baolina kitra sy mpankafy. Ny fahombiazany dia nanampy ny klioba ny fiadiana ny Tompondaka Erantany ho an'ny Brezila voalohany tao 1993. Amin'ny fotoana iray dia nanomboka niantso azy ny rehetra hoe 'New Pele ' noho ny lamin'ny baolina kitra mitovy amin'ny an'i Pele raha nanomboka tamin'ny taona mitovy amin'ny 1958 izy. Fotoana vitsy talohan'ny nahatongavan'i Ronaldo tombontsoa lehibe ho an'ny firenena tamin'ny taona 17.
Moreso, ny fahombiazany dia nanome azy tapakila mandeha ho azy ho an'ny mondialy 1994 izay natao tany Etazonia. Na dia nijery ny fifaninanana avy amin'ny banky aza izy raha nandresy ny Cup ny mpiray tanindrazana taminy.
Vetivety dia niparitaka tany amin'ny morontsirak'i Eoropa ny talentan'i Ronaldo tamin'ny alàlan'ny fampidirany ny ekipa mpilalao baolina kitra 1994 any Brezila, ary navotsotr'i Piet De Visser ny iray tamin'izy ireo, izay nanjary toy ny iray tamin'ireo mpanazatra tsara indrindra tamin'ny baolina kitroka efa nipoitra teo amin'ny Ronaldo mpitsabaka Romário.
Ny fahombiazany teo amin'ny sehatra an-toerana dia nandresy azy ho an'ny PSV Eindhoven taorian'ny mondialy.
Nanaiky i Ronaldo satria fomban-drazana ho an'ireo mpilalao avy any Brezila no nandeha tany Hollande na Frantsa mba hianatra ny lalao Eoropeana alohan'ny hetsika goavana. Ronaldo no nitifitra ny kianja rehefa namidy ny fifanekena tamin'ny PSV Eindhoven any Holandy i 1994, ary nitifitra tanjona iray isaky ny lalao tamin'ny fifaninanana Eoropeana ambony.
Nandany fizaran-taona roa tao amin'ny PSV Eindhoven izy ary nahatratra ny tanjona 54 tao amin'ny lalao 57.
Ronaldo Luis Nazario avy ao amin'ny Lima Childhood Story Plus Untold Biography facts -Ny taona tsy hay hadino 1996
Io no fahavaratry ny 1996. Herintaona izay nitrangan'ny zavatra maro. Herintaona i Michael Johnson dia nandresy volamena indroa tao amin'ny Olympika Olympika. Herintaona no nandraisana an'i Angletera ary nahatratra ny farany ny fifaninanana Eoropeana. Herintaona nahitam-boka dimy ireo antsoina hoe The Spice Girls dia niresaka taminay izay tiany, izay tena tadiavin'izy ireo tokoa. Herintaona vao noforonina ny Hotmail. Herintaona novonoin'ny Fugees taminay io hira io. Ny taona Nelson Mandela dia nitarika ny praiminisitra Afrika Atsimo. Ny taona Prints Charles sy Princess Diana dia nanao sonia taratasy fisaraham-panambadiana.
Ambonin'izany rehetra izany,
Herintaona ny anarana Ronaldo Luis Nazario de Lima dia lasa anarana ao an-tokantrano izay nisarika ny sain'izao tontolo izao. Tamin'ity taona ity i Barcelona dia nisintona ny zazalahy kely 19-taona (Ronaldo Luis Nazario de Lima) avy amin'ny PSV Eindhoven izay afaka manatratra tanjona amin'ny fialamboliny.
Tao anatin'izany fotoana izany dia i Sir Bobby Robson sy Jose Mourinho Niara-niasa tamin'i Ronaldo ho mpitantana sy mpanampy an'i Barcelona.
Ianao dia nitoetra irery tamin'i Barcelona nandritra ny vanim-potoana iray monja, saingy nisy fiantraikany tamin'ny filazana tamin'ny fotoanany tamin'ny klioba.
Ronaldo nitarika ny klioba ho an'ny Coupe des Champions UEFA sy ny voninahitra Copa del Rey.
Ianao ihany no hijanona amin'ny Barcelone mandritra ny fotoana iray monja, fa misy fiantraikany amin'ny filazana amin'ny fotoanany amin'ny klioba. Nahazo ny tanjona 47 tao amin'ny lalao 49 izy ary izy koa no mpilalao tanora indrindra nandresy ny mpilalao baolina kitra FIFA nandritra ny taona nahazoany, rakitsoratra iray izay miavaka.
Tao amin'ny 20 taona, Ronaldo dia naneho ny fenitry ny fanarenana an'izao tontolo izao mbola tsy nahita hatramin'izay.
Amin'ny teniny ... "Tiako ny manatratra tanjona rehefa mandalo ny mpiaro sy ny mpiambina. Tsy izany no fahaizako, fa fahazarana. " - Ronaldo.
Ronaldo Luis Nazario avy ao amin'ny Lima Childhood Story Plus Untold Biography facts -Ny Inter Milan Call
Nanomboka niresaka tamin'ny baolina ny vola tamin'ny taona 1998. Tamin'ity taona ity, Barcelona dia nanaiky ny fandefasana rakitsoratra manerantany ho an'ny £ 18 tapitrisa avy amin'ny Inter Milan ho an'i Ronaldo.
Tsy misy olona iray hiverina amin'ny fanamby iray, dia nanao ny hetsika ho an'ireo gigantesiana Italiana i Ronaldo. Ny vanim-potoany voalohany dia karazan'izao tontolo izao izay niandrasan'ny mpilalao kintana - 34 tanjona maromaro nanaraka, ary tapaka maro ny rakitsoratra.
Ronaldo no mpilalao voalohany mba handresy indray ny FIFA World Player amin'ny taona ho an'ny taona, ary koa ny fanesorana ny Ballon D'or prestige.
Ronaldo Luis Nazario avy ao amin'ny Lima Childhood Story Plus Untold Biography facts -Ny Final World Cup 1998
Hatramin'ny nandehanan'ny lalao mondialy, ilay iray nilalao tao amin'ny 1998 teo anelanelan'i Brezila sy Frantsa dia tsy afaka nanana soratra tsara kokoa. Raha niady hiaro ny satroboninahitra azony tamin'ny 1994 i Brezila, dia nilalao tao an-trano i Frantsa, miezaka ny hahazo ny Trophy Golden voalohany. Ny lalao ihany koa dia nahita ny angano roa nifamotoana, niaraka tamin'i Zinedine Zidane nanaloka ny Ronaldo Breziliana, izay nibodo ny adihevitra mahafinaritra izay namela tanteraka ny mpankafy azy rehetra.
Diniho ity-Ronaldo, zazalahy volamena any Brezila, izay nandrasana ny hitarika ny sisintany hanenjehana an'i Frantsa, dia narary ora vitsy talohan'ny lalao.
Vetivety dia nanao tantara vaovao ireo mpitsikera fa nalahelo mafy tamin'ny vavony. Nisy fialantsiny misimisy kokoa nipoitra, avy amin'ny sakafo manapoizina amin'ny olana manokana amin'ny fitiavany. Farany, ny dokotera Breziliana Lidio Toledo ihany koa dia nanambara ihany koa: ny dokotera Breziliana dia nirohotra nitsoaka tany amin'ny toeram-pitsaboana taorian'ny fitsapana mafy tamin'ny torimasony ny alina talohan'ny farany.
Nesorina tamin'ny ekipa voalohany izy ary nandositra nankany amin'ny hôpitaly mba hanao fiverenana goavana ho an'ny ekipa minitra alohan'ny handosirana.
Na izany aza, nisy ihany koa ny tadiny tao amin'ilay tantara. Raha tokony hanome voninahitra an'i Brezila ho voninahitry ny Fiadiana ny Amboara Erantany i Ronaldo, dia tsy afaka nampihitsoka ny aretiny izy ary ny fampisehoana ambany kokoa avy amin'ny mpikomy dia namela Zinedine Zidane sasany handresy indroa an'i Frantsa amin'ny fandresena 3-0 nandresy an'i Brezila.
"Very ny World Cup izahay saingy nahazo kaopy iray hafa - ny fiainako" - Ronaldo (mikasika ny fiafaran'ny mondialy 1998)
Ronaldo Luis Nazario avy ao amin'ny Lima Childhood Story Plus Untold Biography facts -Ny Tantaran'ny Fahavoazana
Betsaka ny mpilalao baolina kendreny manana traikefa matihanina. Michael Owen, olona natahotra ny haavony haingana, dia niatrika ny ratra tahaka an'i Ronaldo ary tsy afaka niverina ho lasa ny antsasaky ny mpilalao izy taloha. Paul Gascoigne, Tiger Woods, Joe Cole, Gary Neville ary atleta maromaro maro no naratra mafy ary tsy afaka hiverina amin'ny endrika tsara indrindra.
Misy tsiro malefaka manasaraka ny lehibe, avy amin'ny sisa. Tena sarotra tokoa ny ho tonga tsara indrindra. Inona no sarotra kokoa? Ho tonga tsara indrindra, ho lavo, hosoratana ary avy eo dia ho lasa tsara kokoa. Ity no tantaran'i Ronaldo Luis Nazario de Lima.
1998 WORLD CUP LAHATSIKA SY FIVORIANA- Naratra nandritra ny fifandonana tamin'ny mpiambina Frantsay, Barthez tao amin'ny kaonty 1998 XNUMX.
Taty aoriana dia nandray ny valifaty tamin'i Barthez izy, izay nifandona sy naratra tao amin'ny lalao mondialy 98 farany, niaraka tamin'ny lozam-pandihizana nahafatesana an'i Manchester United izay nahatonga azy hiantehitra avy amin'ny mpino Old Trafford.
NY 1999 / 2000 FAHADIOVANA SY FIVORIANA- Ny volana novambra 21st 1999, namono indray ny loza, satria nokorokoroin'i Ronaldo ny tendron'ny lohalika iray nandritra ny fifandonana tamin'ny Serie A tamin'ny Lecce.
Taorian'ny fandidiana sy ny fiverenan'ny volana 5, ny Breziliana dia nanao ny fiverenany tamin'ny final Coppa Italia nanohitra an'i Lazio, saingy nisy ny fanantenana ny fiverenan'ny mofomamy iray nopotehina taorian'ny fijalian'izy ireo fahavoazana faharoa sy lehibe kokoa teo amin'ny lohalika teo aorian'ny 7 minitra teo an-kianja . Nosakanan'ny mpivarotra iray izy.
Tsy nilalao intsony izy hatramin'ny faran'ny vanim-potoanan'ny 2001 / 2002. Raha heverina, dia nivoaka nandritra ny herintaona izy. Niseho tamin'ny lalao enina ambiny izy ary naka ny tanjona 7 ho an'ny Inter tamin'ity vanim-potoana ity.
Ronaldo Luis Nazario avy ao amin'ny Lima Childhood Story Plus Untold Biography facts -Post Inter Milan Era
Rehefa tafaverina izy, dia niezaka mafy i Ronaldo mba handresy lahatra an'i Luiz Felipe Scolari, mpitantana an'i Brezila, mba hampiditra azy ao amin'ny ekipany ho an'ny Mondialy 2002 any Japon / Korea. Nanandrana nanova ny lalao izy hanoloana ny fianteherany amin'ny haavon'ny vitany sy ny fahaizany, dia mpilalao hafa i Ronaldo nandritra ny fotoana nahaterahany. Niantehitra bebe kokoa tamin'ny tanjaka sy maso manatsara kokoa izy. Izany no nahazoany traikefa. Navoakany ny lalaovim-piainany vaovao tamin'ny fanaparitahana azy - ny fitarihana an'i Brezila ho amin'ny farany ary ny fifaninanana amin'i Alemana. Ny talk of pre-match rehetra dia nifantoka tamin'i Ronaldo nandresy ireo demony avy tamin'ny 1998 - ary nandresy azy ireo.
Ny Breziliana dia nanambara ny fomba amam-panaony vaovao ao amin'ny kaontinanta 2002 ho an'ny vokatra mahatsiravina izay nitondrany an'i Brezila ho an'ny mondialy iray farany ary nahafaty ny tanjona 2. Nataony ny tanjona 8 nandritra ny fifaninanana ary nandresy ny MVP. Nahazo ny mpilalao baolina FIFA ihany koa izy ary i Laureus dia niverina tamin'ity taona ity.
Ny fahombiazany dia nahazo loka hafa ho an'ny mpizara eran'izao tontolo izao, tamin'ity indray mitoraka ity, € 39 tapitrisa, araka ny nampanantenan'i Real Madrid azy ho an'ny tarika Galacticos. Na dia teo anelanelan'ny volana oktobra aza dia noraisin'ny mpankafy Real Madrid an'i Ronaldo tamin'ny fandraisam-pitenenana maherifo izy - nihiaka ny anarany tamin'ny lalao tsy nanatri-maso azy ary nandrava rakitsoratra ho an'ny varotra entana. Nanao izay tsara indrindra vitany i Ronaldo dia nisaotra ireo mpankafy tamin'ny tanjona 2 tao am-piandohany. Nanohy nanatontosa ny tanjon'ny 30 amin'ny làlana handresena an'i La Liga miaraka amin'i Madrid izy.
Na dia teo aza ny fifandonana nahitana an'i Ronaldo, dia nanohy nitantona ny tanjona 104 tao amin'ny lalao 184 ho an'i Madrid nandritra ny taona 5 tao amin'ny klioba i Ronaldo.
Ronaldo Luis Nazario avy ao amin'ny Lima Childhood Story Plus Untold Biography facts -Post Madrid Era (Krizin'ny Fahavoazana sy ny Comeback)
Ronado dia nanjary nankasitraka an'i Fabio Capello, Madrid mpitantana tao 2006, ary nanaraka ny sonia an'i Ruud Van Nistelrooy avy ao amin'ny Manchester United, dia nalamina ny andron'i Bernabeu.
Tamin'ny 27th 2007 tamin'ny volana Janoary, nanao sonia ny AC Milan i Ronaldo tamin'ny fifanarahana iray tapitrisa tapitrisa Euro.
Tamin'ny febroary 13 2008, tamin'ny lalao fifaninanana hamelezana an'i Livorno, i Ronaldo dia nogadraina avy eny an-kianja rehefa avy nijaly tamin'ny lelam-pahefana nokapohina iray taorian'ilay fikomiana tsy manan-tsiny handresena ny baolina.
Riralim-panafana i Ronaldo no tratran'izany, ary na dia ny Milan Fitness Lab malaza aza dia mbola nanantena ny hahazoany fanavaozana indray - tsy nanavao ny fifanarahana tamin'ny faran'ny vanim-potoana i Milan, na dia nitifitra aza ny tanjona 8 tao amin'ny lalao 20.
Araka ny voalazan'i Ronaldo, "Ny androm-piainako dia zava-tsarotra foana ary efa vonona ara-tsaina aho fa ity no fanamby lehibe indrindra amin'ny fiainako." - Ronaldo
Nandritra ny fihetsiketsehana nandritra ny herintaona, dia nivoady i Ronaldo mba hanaporofo fa diso ny olon-drehetra ary niverina avy tamin'ny lozam-piarakodia fahatelo nataony. Ny fiverenana tany an-tanindrazany dia nahita ny famantarana mirakitra ny kintana ho an'ny Korintiana, izay nahitan'izy ireo hôpitaly niarahaba ny fanoloran-tenany.
Na dia eo anelanelan'ny volana 13 aza i Ronaldo, dia nanampy ny tanjona 30 tao amin'ny 55 izy, nanampy ny ekipany hanao andiany sy baolina indroa. Nisy ihany koa ny antso navaozina mba hamerenana azy indray ho an'ny ekipa Breziliana indray ho an'ny World Cup 2010. Tsy nandeha izany.
Ronaldo Luis Nazario avy ao amin'ny Lima Childhood Story Plus Untold Biography facts -Mitantana ny fiadiana ny amboara eran-tany farany
Ronaldo dia nilalao tao amin'ny kaonty 2006 15 na dia teo aza ny fisalasalana nipoitra tamin'ny hatsarany sy ny lanjany. Nandao ny rakitsoratr'i Gerd Muller izy ary lasa mpilalao baolina kitra eran-tany rehetra miaraka amin'ny tanjona XNUMX.
Nahatanteraka izany izy, miaraka amin'ny tanjon'ny marika manohitra an'i Ghana tamin'ny 27th ny volana Jona, ka nandresy ny tanjony 15th tao amin'ny lalao famaranana World Cup. Nandao an'i Frantsa i Brezila tamin'ny faran'ny fizarana farany.
Ronaldo Luis Nazario avy ao amin'ny Lima Childhood Story Plus Untold Biography facts -Manana olana ara-pahasalamana
Ronaldo, niady tamin'ny fahazoana lanjany be loatra tao anatin'ilay sehatry ny asany.
Ny fitsaboana ara-pahasalamana dia nanambara fa manana hypothyroidism izy - aretina iray izay misy fiantraikany amin'ny fikorontanan'ny vatan'ny olona.
Araka ny voalazan'i Ronaldo, "Rehefa avy nandinika ny fitsaboana aho, dia hitako fa nijaly tamin'ny fitarainana aho, antsoina hoe hypothyroidism, izay mampihena ny fatran'ny metabolismao, ary ny mifehy azy io dia mila hormones izay tsy avela amin'ny baolina kitra noho ny fanoherana ny doping. Matahotra aho fa efa akaiky ny farany. "
Ronaldo kosa dia nampanantena ny mpankafy azy hiady amin'ny lanjany. Tsy nanome toky azy velively izy. Indraindray dia tonga tamin'ny rehetra fa very ny fanantenana rehetra taorian'ny ady mafy.
Tsy niasa mafy mihitsy izy mba hiorina indray.
Ronaldo Luis Nazario avy ao amin'ny Lima Childhood Story Plus Untold Biography facts -Manambara ny fisotroan-drononony
Ny mpilalao matihanina amin'ny fotoana fohy fahatelo nandritra ny taona Ronaldo dia nanambara ny fisotroan-dronony avy amin'ny baolina tamin'ny alatsinainy teo amin'ny antsoina hoe fihaonam-pampitam-baovao izay nahatonga ny 18 taona ho avy. Ronaldo ihany no nanambara ny fisotroan-dronony tamin'ny Febroary 2011.
Hoy i Ronaldo-Ny asako dia tsara tarehy sy mahafinaritra. Nanana safidy maro aho saingy fandresena tsy hita. Sarotra be ny mamela zavatra iray izay nahafaly ahy. Naniry ny hitohy aho, saingy tsy maintsy manaiky aho fa very ny ady amin'ny vatako. "
Ronaldo Luis Nazario avy ao amin'ny Lima Childhood Story Plus Untold Biography facts -Tontolo tsy rariny (ampitahao amin'ny Cristiano Ronaldo)
Ny zavatra voalohany tonga ao an-tsaintsika rehefa misy olona manonona anarana hoe Ronaldo dia Cristiano Ronaldo, Cr7, Cr9. Luis Nazario De Lima Ronaldo dia matetika antsoina hoe, 'Fat Ronaldo', 'Mota (matavy) Ronaldo', 'Mottai (sombintsombiny) Ronaldo', 'Resaka volo ronaldo', 'The other Ronaldo'.
Maro ireo mpankafy an'i Ronaldo de Lima no mahatsiaro tena ho reraka rehefa misy olona ambony tahaka azy dia miverina amin'ny halaliny toy izany ary tsy mahatsiaro ny zava-bitany, fa noho ny habetsahany no mavesatra na ny volony. Io no iray amin'ireo antony nanapahan'i LifeBogger ny fotoana sy ny fanoratana momba ny mpilalao iray izay mety ho fitaomam-panahy lehibe indrindra ho an'ny mpilalao baolina.
Manontany anao izahay izao, hahatsiaro an'i Ronaldo noho ny lanjany, na ny taham-pahaizana vitany? Hahatsiaro azy ve ianao noho izay nataony tamin'ny volony na izay azony natao tamin'ny tongony?
Amin'ny manaraka dia misy olona iray milaza an'i Ronaldo, azonao eritreretina ve ilay mpihira portioge izay nahazo ny loka FIFA World Player indray mandeha na ny Breziliana nahazo azy io tamim-paharetana ?. "Alefaso ny fanehoan-kevitra eto ambany rehefa avy namaky ity lahatsoratra ity".
Ronaldo Luis Nazario avy ao amin'ny Lima Childhood Story Plus Untold Biography facts -LifeBogger Rankings
Rehefa efa nosoratana imbetsaka in-telo tao anatin'ny asa aman-draharahany izy, fantatrao izao fa mahafinaritra azy ny manaporofo fa diso ny fisalasalany. Ao Ronaldo, manana mpilalao iray izahay izay voatery nanova tanteraka ny lalany intelo naratra noho ny totalim-paharetana mihoatra ny 36 volana. Izany no eritreretintsika momba azy eo amin'ny lisitra misy eto ambany.
Iphone 5C namboarina 23, 2018 Ao amin'ny 9: 13 am
Ny fomba fanoratana ny zava-drehetra ao amin'ity sora-baventy ity dia tena mendri-piderana, azo atao daholo ny rehetra
Mahatsiaro mora foana, Misaotra betsaka.
David Araniva Jiona 24, 2018 Ao amin'ny 8: 49 am
Tena mahavariana izany. Tiako ny namaky ny tantaranao. Ronaldo mbola tsara fanahy. Misaotra mizara ny tantarany.
Yh nabil Oktobra 5, 2018 Tamin'ny 10: 50 hariva
Cr9 dia tongotra goavam-be.ao tena ho an'ity fitaovana ity ary faly izahay amin'izany
Novambra 11, 2017
Gareth Bale Fitiavam-bahaon'ny ankizy momba ny tantaram-piainana tsy hita isa
Desambra 16, 2017